ရီးယဲလ်၊ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ မန်စီးတီးတို့ ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ထုတ်ပယ်ခံရဖို့ရှိနေ
April 20, 2021 author one Articles 0
ဥရောပစူပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့ ရီးယဲလ်၊ ချယ်လ်ဆီးနဲ့မန်စီးတီးအသင်းတို့ကို ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်ကနေ ထုတ်ပယ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(UEFA)ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေပါဝင်မယ့် ဥရောပစူပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို စတင်ကျင်းပမယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်၊ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ မန်စီးတီးတို့အပြင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ လီဗာပူးလ်၊ အက်သလက်တီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ အင်တာမီလန်၊ အေစီမီလန်၊ စပါး၊ အာဆင်နယ်စတဲ့ ထိပ်သီးအသင်းတချို့ကလည်း ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပေမယ့် အဲဒီပြိုင်ပွဲအပေါ် UEFA တာဝန်ရှိသူတွေသာမက ဘောလုံးလောကရဲ့နာမည်ကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်အများစုက ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီပြိုင်ပွဲအပါ် UEFA က ထောက်ခံမှုမရှိသလို၊ UEFA ကိုကျော်ပြီး ကလပ်အသင်းတွေက ကိုယ့်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အသင်းတွေဟာ ဥရောပပြိုင်ပွဲကနေထုတ်ပယ်ခံရဖို့ရှိနေတာပါ။ UEFA ရဲ့ အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒိန်းမတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဂျက်စပါမိုလာက ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ ရီးယဲလ်၊ ချယ်လ်ဆီးနဲ့မန်စီးတီးအသင်းတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲကနေအထုတ်ခံရဖို့ရှိနေပြီး အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို လာမယ့်သောကြာနေ့ကျရင် UEFA က ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့အသင်းတွေ(ရီးယဲလ်၊ ချယ်လ်ဆီးနဲ့မန်စီးတီးတို့ကို ဆိုလို)ဟာ ပြိုင်ပွဲကနေအထုတ်ခံရဖို့ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို လာမယ့်သောကြာနေ့မှာ UEFA က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီအတိုင်းအတည်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ လာမယ့်သောကြာနေ့မှာ UEFA အမှုဆောင်ကော်မတီအထူးအစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဒိန်းမတ်ရုပ်သံတစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဂျက်စပါမိုလာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပစူပါလိဂ်ကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်ကို UEFA ဥက္ကဌဖြစ်သူဆယ်ဖာရင်ကလည်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ဒီပြိုင်ပွဲကို ဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးက တညီတညွတ်တည်း ကန့်ကွက်နေကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဟာ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး လာမယ့်တစ်ပတ်ကျရင် ရီးယဲလ်နဲ့ချယ်လ်ဆီး၊ PSG နဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်တာကြောင့် UEFA အနေနဲ့ ရီးယဲလ်၊ ချယ်လ်ဆီး၊ မန်စီးတီးတို့ကို ပြိုင်ပွဲကထုတ်ပစ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီရာသီကုန်မှပဲ အရေးယူမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . . .
ရီးယဲလ္၊ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔ မန္စီးတီးတို႔ ဒီရာသီခ်န္ပီယံလိဂ္ကေန ထုတ္ပယ္ခံရဖို႔ရွိေန
ဥေရာပစူပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါဝင္ဖို႔သေဘာတူညီခဲ့ၾကတဲ့ ရီးယဲလ္၊ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔မန္စီးတီးအသင္းတို႔ကို ဒီရာသီခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ကေန ထုတ္ပယ္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဥေရာပေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(UEFA)ရဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပထိပ္သီးအသင္းေတြပါဝင္မယ့္ ဥေရာပစူပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္းပမယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ရီးယဲလ္၊ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔ မန္စီးတီးတို႔အျပင္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္၊ လီဗာပူးလ္၊ အက္သလက္တီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္၊ အင္တာမီလန္၊ ေအစီမီလန္၊ စပါး၊ အာဆင္နယ္စတဲ့ ထိပ္သီးအသင္းတခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာပါဝင္ဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေပမယ့္ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲအေပၚ UEFA တာဝန္ရွိသူေတြသာမက ေဘာလုံးေလာကရဲ႕နာမည္ေက်ာ္လူပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက ေဝဖန္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီၿပိဳင္ပြဲအပၚ UEFA က ေထာက္ခံမႈမရွိသလို၊ UEFA ကိုေက်ာ္ၿပီး ကလပ္အသင္းေတြက ကိုယ့္ဆႏၵတစ္ခုတည္းနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔သေဘာတူညီထားတဲ့အသင္းေတြဟာ ဥေရာပၿပိဳင္ပြဲကေနထုတ္ပယ္ခံရဖို႔ရွိေနတာပါ။ UEFA ရဲ႕ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒိန္းမတ္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဂ်က္စပါမိုလာက ဒီရာသီခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတဲ့ ရီးယဲလ္၊ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔မန္စီးတီးအသင္းတို႔ဟာ ၿပိဳင္ပြဲကေနအထုတ္ခံရဖို႔ရွိေနၿပီး အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လာမယ့္ေသာၾကာေန႔က်ရင္ UEFA က ထုတ္ျပန္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ဒီရာသီခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတဲ့အသင္းေတြ(ရီးယဲလ္၊ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔မန္စီးတီးတို႔ကို ဆိုလို)ဟာ ၿပိဳင္ပြဲကေနအထုတ္ခံရဖို႔ရွိေနပါၿပီ။ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လာမယ့္ေသာၾကာေန႔မွာ UEFA က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီအတိုင္းအတည္ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဒီရာသီခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဘယ္လိုအဆုံးသတ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ လာမယ့္ေသာၾကာေန႔မွာ UEFA အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအထူးအစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ဒိန္းမတ္႐ုပ္သံတစ္ခုနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဂ်က္စပါမိုလာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဥေရာပစူပါလိဂ္က်င္းပမယ့္အစီအစဥ္ကို UEFA ဥကၠဌျဖစ္သူဆယ္ဖာရင္ကလည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲကို ေဘာလုံးေလာကတစ္ခုလုံးက တညီတၫြတ္တည္း ကန႔္ကြက္ေနေၾကာင္းဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲဟာ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး လာမယ့္တစ္ပတ္က်ရင္ ရီးယဲလ္နဲ႔ခ်ယ္လ္ဆီး၊ PSG နဲ႔ မန္စီးတီးအသင္းတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ UEFA အေနနဲ႔ ရီးယဲလ္၊ ခ်ယ္လ္ဆီး၊ မန္စီးတီးတို႔ကို ၿပိဳင္ပြဲကထုတ္ပစ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီရာသီကုန္မွပဲ အေရးယူမလားဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ . . .
မန်စီးတီးမှာ ပွဲထွက်ခွင့်နေရာ ပျောက်နေတဲ့ စတာလင်းကို ခေါ်ယူဖို့ ရီးရဲလ် စိတ်ဝင်စားနေ
ယူနိုက်တက် က အက်ဝုဒ်ဝဒ်ဟာ သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်ဒလန်လား